The Ultimate Guide to Stanozolol (Winstrol) yeChipupuriro
Zvose pamusoro peStanzolo (Winstrol)
1.Chii Stanozolol? 2. Stanozolol inoshanda sei?
3.Stanozolol inoshandisa 4.Stanozolol dosage
5.Kutora sei Stanozolol 6. Ndiani asingafaniri kutora Stanozolol?
7.Stanozolol cycle 8.Stanozolol migumisiro
9.Stanozolol hafu-hupenyu 10.Stanozolol inobatsira
11.Stanozolol mazano 12.Stanozolol inotengeswa
13.Stanozolol yekuvaka muviri - (summary)
1. Wchifeko iStananol?
Stanozolol (10418-03-8) iyo hormone yavanabolic iripo mune fomu yakarongeka dihydrotestosterone (DHT) fomu. Kuchinja kwemugadziri kunoitwa paDH hormone kuti kuderedze uyerogenicity iyo ichivandudza mazana e anabolic imvumo inobvumira vashandi kuwana mishonga yakaonda uye kusimbisa simba rose remuviri. Stanozolol inobva mune zvose zviri mumuromo uye injectable maitiro zvinoreva kana iwe usinganzwisisi nemajekiseni iwe unogona kuenda kumuromo. Mushonga unoitwa uye unotengeswa pasi pezita rinonzi Winstrol. Migumisiro yaro inoita kuti mishonga yacho ive yakarongeka pakati pevatatu vatatu vanozivikanwa steroid pakati pevarimi vemasikirwo nevatambi vechikoro. Dianabol ndiye steroid inotungamirira pakupa zvibereko zvakanaka, Deca-Durabolin kutora nzvimbo yechipiri ipapo Stanozolol kugara panzvimbo yechitatu.
Vanhu vazhinji vakatanga kuzonzwa pamusoro peWinstrol mu1988 apo Ben Johnson weCanada sprinter akaedzwa zvakanaka munguva yeSeoul Summer Olympic mitambo. Kunyange zvakadaro, Stanozolol inogona kunyorerwa kumashure e1959 apo mishonga yemishonga yakabudiswa kunechiremba, uye nesayenzi. Mushonga wacho wakatanga kutengeswa uye kutengeswa neWatthrop laboratories. Mugore re1961, United States of America yakashambadzirwa nekambani Sterling yakatenga chirongwa chechirwere chemishonga yeAmerican soko ndokubva raipa zita rinonzi Winstrol. Mushure mekutarisana nemiedzo yakasiyana-siyana uye zvidzidzo zvezesayenzi, Winstrol akagamuchirwa mukurapa matambudziko akawanda ehutano uye akazobudiswa pamusika semishonga yemishonga. Ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti Winstrol yakanga iri mishonga yakanakisisa mukurapwa kwemisumbu kuparadza zvirwere, kupisa varwere, kuwedzera kukura zvikuru muvana pamwe nekurapa Osteoporosis. Boldenone Undecylenate (Kushanda) Zvishandiso, Purogiramu, Kuyera, Kucheka, Kudhinda
Mumwe musayendisiti akaedza kuedza kukwanisa kwemishonga mukurapa kwekushaya ropa, asi haina kubuda kuti ibudirire seyedzidzo yapfuura. Winstrol haina kusunga nemabasa asina-receptor-mediated sezvimwe vana anabolic steroid akadai Dianabol uye Anadrol. Pane kudaro, Stanozolol inosunga chete ne-androgen receptors ichikupa mukana wekunakidzwa nemishonga yepamusoro yemishonga. Ukuwo rumwe rutivi, Stanozolol inewo hukama hwakaderera kana ichisunga ne-glucocorticoid kusunga nzvimbo. Iyo mishonga ine maitiro mashoma eprogestogenic basa pamwe nekupa mabasa akazvimirira uyerogen receptor. Stanozolol inokurudzirawo protein inowanikwa mumuviri wako uye panguva imwechete inosimudzira synthesis ya collagen.
Stanozolol chimiro chemakemikari
Uchitarisa kuWaststrol makemikirwo akaitwa, iwe uchaona kusiyana kwakasiyana mukuenzanisa nevamwe vanabolic steroids. Pasinei neStanozolol steroid yakabva ku dihydrotestosterone, yekutanga ring cycloalkane inowanikwa ku3-2 pyrazole boka. Kutarisa dihydrotestosterone uye Winstrol mifananidzo, unogona kukurumidza kuona kusiyana. I3 keto boka rakatsiviwa nemapoka e-pyrazole anobatanidzwa kumhete ye cycloalkane pamakemikari. Kushandurwa muWaststrol makemikari yakakosha ndeye mushure mekutsvaga kwayo seheterocyclic steroid.
Girazi inonzi pyrazole inopa Stanozolol hukama hwakasimba hunosungirirana nemishonga yako yemisumbu uye androgen receptors. Winstrol makemikari akashandurwa mararamiro anoita kuti zvive zvakasiyana nedzimwe dihydrotestosterone yakabva anabolic steroids. Iyo DHT inopa basa shoma kana kuti zvinokonzera musimba wako kana zvichienzaniswa nezvinoitwa neStanozolol kune vashandisi. Zvose vanabolic steroids ndezvenhengo yeDTH yakabva, uye iyo inosanganisira Anavar, Primobolan, Winstrol, uye Masteron. Chii chinokonzera kusiyana kukuru pakati pevana anailic steroids ndiko kuchinjwa kwemaikemikari zvakagadzirisawo kushanda kwechirwere.
Stanozolol ine simba rakagadziriswa nevanabolic pamwe chete neusina simba uyerogenic nemhaka yekubatanidzwa kwepirrazole mumakemikari ayo. MuWeststrol 17th carbon, kune methyl boka rekubatanidza rinoita kuti mishonga inyore nyore nyore kupinda muchiropa chako paunotora chirwere chemukanwa. Uyezve, chirwere ichi chinopawo hepatic metabolism kushorwa kune all anabolic steroids iwe unotora kana kuisa naWeststrol. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kune vadzidzisi vemitambo uye mutambi kuti afare zvikuru musimba musimba uye kuonda mukati uye pakuguma kweStanozolol.
Kusiyana kwezvidzidzo zvezesayenzi zvakaratidza zvakajeka wekutanga Winstrol action mechanism. Iyo Stanozolol inonziwo inogona kuenzaniswa neprogestogenic. Parizvino, hapana chimwe chinoshamisa cheprogestogenic basa iro Winstrol rinogona kukonzera mumuviri wako. Sezvambotaurwa kare Stanozolol ane hukama hwepamusoro pakunosangana nekubatana nekodhimoni-kusunga globulin. Izvozvo zvinoreva, kune mamwe anabolic steroid inowanika muropa rako iro rinotumira zviratidzo zvakakodzera zvinokonzera kukura kwemisimba. SHBG ndiyo mapurotini anoshanda nekubatanidza nekusunga nemakemikari ega ega ega ega mumuviri wako seyakagadzirwa anabolic steroid, testosterone, uye estrogen. Nguva iyo mapuroteni ave akabatanidzwa kumahomoni epabonde anoita kuti varare kwenguva iyo vasungwa pamwe chete.
Stanozolol inodzvinyirira kubudisa SHBG mumuviri wako pamwe nekudzivirira kuti vasabatana nevanabolic steroid yaunotora. Chidzidzo chakaitwa nemasayendisiti anosanganisira 25 varume / Winstrol vashandisi vakapiwa mishonga nemuromo. Gare gare yakawanikwa kuti maitiro ekugadzirwa kweSBBG pakati pezvidzidzo zvakaderedzwa ne48.4% mukati memazuva matatu ekutanga mushure mekutora dhigiriji. Izvozvo zvinoratidza kuti Stanozolol inokwanisa sei, mukuderedza kubudisa SHBG mumuviri. Kune rumwe rutivi, Winstrol anozivikanwawo nekudzivisa kusunga pamwe ne-aromatase enzymes pamwe nekushandurwa kuva estrogen. Iyi pfuma inogadzira Stanozolol inodiwa steroid kuvanhu vazhinji sezvo ichiita kuti vadzivise kuchengetwa kwemvura uye kuwedzerwa kwemigumisiro yeropa inowanzobatwa nevana vanalic steroid.
Pamusoro peiyo, mushonga wacho unogonawo kudzivisa kusangana chero kupi zvako ne 5 Alpha-reductase enzyme iyo inokonzera kutendeuka testosterone muDHT. Saka, paunoshandisa Stanozolol, iwe unogona kuva nechokwadi chokuti kutendeuka hakuzoitiki sezvo iri dihydrotestosterone steroid yakashandurwa. Nokuda kwekushandurwa kwe steroid ino inoshamisa, inoipa nguva yakareba yenguva. Kune avo vanoda kutora fomu yeWinstrol inopinda, mushonga unenge uine hafu yeupenyu hunoshandiswa hwemaawa e24 mumuviri wako. Iyo miviri inosara inoramba yakashanda mumuviri wako wepamuviri kwemaawa anopfuura 9, asi iwe ucharamba uchinakidzwa nezvikomborero kunyange kana wapedza kupedza kwako.
The androgenic and anabolic Winstrol simba, inoshandiswa masayendisiti ku30 uye 320. Stanozolol inopfuura nguva 3 nguva anabolic simba kupfuura ye testosterone. Kazhinji, testosterone inomiririra iyo inenge inenge yose steroid inotarirwa kusingaenzanisi nekubudirira kwayo uye simba. Testosterone ine anebolic uye inonzi antigenic ye100 imwe neimwe. Pamusoro pezvikamu, Stanozolol ane kodzero yekuti ane 30% pasi uyerogenic kukosha uye 320% yevana anabolic zvinokonzerwa ne testosterone. Zvakakoshawo kunzwisisa kuti zvose injectable uye muromo Winstrol vane imwechete yemakemikari yemaitiro iyo isiri iyo inowanzoitika munenge mune dzose anabolic steroid. Nandrolone Decanoate Uses, Purogiramu, Dosage, uye Zvinoshungurudza
Kuwanda kwevanabolic steroid inowanzove injectable dhigiriji maitiro anojekeswa kuti aenzanise kusunungurwa kwenhamba uye kushanda hafu yeupenyu. Kune rumwe rutivi, inonzi oral dosages inogara iine C17 Alpha alkylated. Izvi zvinomutsa shiri kune vazhinji vanotaura steroid muromo sezvo zvinoreva kuti mishonga inogona kukurumidza kuwedzera chiropa chekutyisa iyo yakaipisisa kwazvo. Sjected injectable inonzi yakachengeteka sezvo ichienda kune rimwe ropa muropa uye kwete chiropa semuromo inotorwa dheji. Mukupfupisa, injectable Winstrol zvipo zvakaderedza zvirwere zvehupatotoxic pachiropa chako kupfuura inonzi dosage. Nokudaro, usati waita sarudzo pane chipi cheStananol kuti ugare nacho, iva nechokwadi chokuti chiremba wako anokutsanangurira zvinobatsira zvemarudzi ose kuitira kuti iwe uite chisarudzo chakanaka. Ndokusaka zvakakurudzirwa nguva dzose kubvunza chiremba wako kana nyanzvi yezvokurapa kuti akubatsire pakusarudza steroid yakarurama kwauri.
2. Sei Stanozolol basa?
Stanozolol (10418-03-8) chirwere chakakwana kune avo vanoda kuda kuwana miviri yakaoma uye yakaonda. Mushonga wacho unowanzoitwa nemuromo mukucheka mitsara kubatsira vashandi kurasika kana kupisa mafuta emuviri. Sezvambotaurwa kare chirwere chinoshanda zvakafanana kune dzimwe DHT chibereko anabolic steroid. Vatambi vakawanda vanofunga steroid iyi sechinhu chine mari shoma Anavar uyewo sechidimbu chekuvaka muviri kuwedzera pamusika. I-A-ring modification inoita kuti Winstrol ave steroid yakasiyana neyakanakisisa yekucheka kukwanisa. Kungofanana nehuwandu hweDTH inoshandiswa steroids, kana uchishandisa Stanozolol, haufaniri kunetseka nezvechirwere ichi chinoshandura muestrogen mushure mekunge ichipinda mumuviri wako. Panewo chimwe chiitiko chinonakidza cheStanozolo, icho vanhu vazhinji vanowanzotaura pamusoro pezvo, uye ndiko kukwanisa kwayo kugadzirisa lipoproteins yakakwirira-mashizha (HDL) uyewo kuwedzera huwandu hwepoprotein levels (LDL). Imwe yeiyo inokosha Winstrol inobatsira iyo vashandi vazhinji vanofarira panguva uye shure kwekupedzisa purogiramu. Zvisinei, HDL / LDL kusvika zvino haigoni kutsigirwa nesayenzi uye inotsigira pamishumo kubva kune uchapupu husina kuvimbika.
Kune rumwe rutivi, Winstrol anonziwo anokwanisa kuderedza kuwanda kwehutachiona-binding globulin (SHBG) nekubudirira kupfuura chero chero aniyolic steroid pamusika nhasi. SHBG inonzi hormone inobvisa steroid yakawandisa mumuviri wako, ichiita kuti isabatsire. Kumusoro-maitiro eHBM hormone kunogona kukudzivirira kubva pakuwana zvizere zvizere zveSteroid kunyange kana iwe ukazadzisa denderedzwa yako uye utora kuwedzerwa kunyoresa. Stanozolol is steroid inogarako iwe unogona kuvhara ne-steroid dzakasiyana-siyana usingabatsiri miviri. Kunyanya kunakidza uye kunobatsira kunenge kuri Proviron uye Winstrol sezvo inokubvumira kufara nekuderera kukuru kweSBBG uye pamwe nekuita kuti iwe uwedzere kubudirira kwehupenyu hwako.
Nekucheka maitiro, vashandisi veStanzolo vadzidza zvakakomba uye zvakaoma misumbu kunyanya kana iwe uchinge waisa mishonga naAnavar. Zvisinei, Winstrol, inogona kunge isiri iyo yakanakisisa panguva yakashata kana kwenguva yakareba kubvongodza sezvo kushandiswa kwakanyanya kungakonzera zvinetso zvekubatana. Vanhu vazhinji vanorondedzera kuti vanotambura nemarwadzo ekubatana uye dzimwe nguva kuomeswa kwemajoini pavanenge vachishandisa Stanozolol. Kunyange zvazvo Winstrol iri steroid yakagamuchirwa zvikuru yekucheka chikamu apo pane kujekesa kwekushanda uye kuwedzera kwekudzidzira kuwedzera, zvingasava zvakanaka pakutsvaira kwechikwata zvinosanganisira kurema kuwedzera kudzidzisa sezvo zvichigona nyore kutungamirira matambudziko akabatanidzwa. IWeststrol inobatsirawo mukubvisa kukanganiswa kwehomoni mumuviri wako iyo inoshandura misungo muafuta. Nokudaro, unogona kuishandisa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvehutano nekusimudzira hupenyu hwako hwose.
3. Stanozolol inoshandisa
Stanozolo is steroid inogona kubatsira mukurapa zvirwere zvakasiyana-siyana uye mumitambo yenyika. Dzimwe nguva unogona kuwana vanhu vachishandisa chiremba vasingazivi mushure mekurairwa nachiremba kuti avabatsire kuderedza kana kuporesa mamiriro ekurapa. Nguva dzose yeuka kuti kutora mishonga pasina mushonga wakakodzera kunogona kutungamirira kumagumisiro akaipa. Nokudaro, zvakakosha kuenda kuchikoro chekuongororwa usati waita mushonga wekurapa kana iwe uri mutambi wenyanzvi. Iko kushandiswa kukuru kweStananol ndeyotevera;
Kurapa kwezvirwere zvakasiyana-siyana
Kubvira pakuvandudzwa kweiyi anabolic steroid, vanachiremba vave vachishandisa iyo kubatsira varwere vakawanda vane zvirwere zvakasiyana-siyana. Semuenzaniso, vana vanotambura nekukura kwakasimba nekuda kwekukwanisa kwayo kuita kuti muviri uwedzere kukura. Kutarisa kuongororwa kwakasiyana-siyana kweStanozolo, vanhu vakawanda vanofara mushure mokunge mishonga ichibatsira vana vavo kuti vawane kukura kwavo. Kune rumwe rutivi, mishonga inobatsirawo mukurapa kwechirwere chisingaperi chisingatauri chinonzi angioedema chirwere chinozivikanwa nekukonzera kuputika kwechiso chenyu, huro, hutambo, maronda, zvipfeko, uye maronda. Maererano nemitauriro yezvechiremba, zviuru zvevanhu vanotambura nechirwere ichi, vakanyora migumisiro inonakidza yezvishoma zvakagadziriswa mushure mekutora danho reStanzolo. Kunyange zvazvo mushonga wacho usingatauri mhinduro pakarepo yei angioedema yakazvarwa, munguva refu, varwere vazhinji vanopa migumisiro yakanaka.
Uyewo, Stanozolol zvakare yaive yakanakisisa mishonga kune varwere vane zvirwere zvinoparadza zvirwere. Mushonga wacho haufaniri kubata chirwere ichi, asi anobatsira varwere kuchengetedza mishonga yavo uye simba rose remuviri. Kungofanana nedzimwe steroids, Winstrol inokurudzira kushandiswa kwemaromoni akasiyana-siyana mumuviri wako anobatsira mukuvandudzwa kwemuviri wako. Zvimwe zvirwere zvinozivikanwa nekuderedza mishonga uye pakupedzisira kuderedza simba remuviri wako izvo zvinogona kuita kuti zvive zvakaoma kuti iwe usimudze zvinhu zvakakomba kana kutotora chikamu mumabasa akasiyana-siyana akaita sekumhanya kana mamwe mabasa emitambo. Kana muviri wako uine simba, uyewo mishonga yauri kutora chirwere chepakutanga inogona kutungamirira nyore kune zvinenge zvisingatarisirwi nemigumisiro.
Osteoporosis chirwere chepfupa chaunogona kutambura kubva kana muviri wako uchirasikirwa zvakanyanya kana zviduku zvakaberekwa. Kuwanda kwevarwere veOsteoporosis mapfupa avo anova asina simba uye anogona kuputsa chero nguva mushure mokunge awira kunyange kana pasina chaicho chakaita. Mune zvimwe zviitiko zvakakomba, varwere vanogona kutarisana nemakumbo maduku uye kukuvadza kunorema pamwe nemigumisiro yehupenyu hwako uye marwadzo shure. Kana iwe ukawana izvi zvinosangana nechiremba wako pakarepo kune Stanozolol mishonga pashure pokunge uchitarisisa zvakakodzera. Vakawanda veOsteoporosis varwere vanopa steroid iyi chiyero chakanaka mushure mekuvabatsira kukunda chirwere ichi chinouraya. Nhamba dzakasiyana-siyana dzeStanozolol dzevekodha dzakarondedzera kubudirira kwakasiyana-siyana kwechirwere ichi pachinoshandiswa mukurapa kwezvinangwa. Kupisa varwere ndevamwe vanobatsirwa zvikuru nemishonga iyi sezvo inokurudzira kupora nokukurumidza kuburikidza nekuvandudza mitezo yomuviri kukura nekugadzirisa.
Muviri mumiviri ine nzira yekuzvigadzirisa pachavo kana iine mishonga yakakodzera uye zvakatipoteredza. Ndicho chaizvoizvo icho Stanozolol inopa kupa vashandi. Vachiremba vanonyorera nokukurumidza kupora kunyange avo vane zvakanyanya kupisa. Masayendisiti vachiri kuitisa zvidzidzo zvakasiyana-siyana kuti vaongorore kana mushonga wacho unogona kugadziriswa kurapa zvirwere zvakawanda mushure mekunge kuedza kwekutanga kwekurapa kwemaanti kusina kubudirira. Vamwe masayendisiti vanodavira kuti Stanozolol inogona kugadziriswa kuva mishonga yakasimba yezvirwere zvakawanda murapi.
Stanozolol yave ichida kuwedzerwa kwevakawanda vekuvaka muviri nemashamisi mushure mekuratidza kuti iri kubudirira pakuvabatsira kuti vabudirire zvinangwa zvavo. Mishonga iyi inonzi inofanirwa kubudirira kwevatambi vakawanda nyika isati yavhiringidza doping inorambidza iyo kuti ishandiswe mumitambo yenyika. Saka, usati watanga kushandisa chirwere ichi semutambo, iva nechokwadi chekuti unofunga kuti mitambo yako inobvumira vatori vechikamu kuti vashandise. Kana iwe uri mumabasa ako hapana chinokudzivisa kushandisa Stanozolol, saka iwe une nhanho iwe unogona kupfuurira uye uve nechokwadi chekuzadzisa zvinangwa zvako zvebasa. Iyo mishonga inoita kuti munhu awane simba rose remuviri iro rinobvumira vatambi kuti vashande kwenguva yakareba pamwe uye vane simba rakakwana kuti vashande panzira.
Kune rumwe rutivi, varimi vemuviri ndevamwe vanobatsirwa zvikuru neStananol. Iyo mishonga inokurudzira kukura kwemasumbu pamwe nekuita kuti vakwanise kukura misimba yakaoma uye yakasimba. Muviri womunhu hauna mahomoni anokwana achakubvumira kukudziridza rudzi rwemasumbu anovaka muviri. Kuwanda kwekushanda kwakakosha kune vashandi vekugadzira muviri, kushandiswa kwekodzero yekuwedzera kunokoshawo pakuwana muviri wehutu uye simba rinodiwa. Muchikwata chekucheka, Stanozolol inotorawo basa rinokosha pakubatsira vanoshandisa kubvisa mafuta akawandisa kana asina kudiwa pamagumo emhepo. Panguva ino, iwe unogona kutungamirira chirwere ichi nemuromo kana kuburikidza nejisi. Iva nechokwadi chokuti chiremba wako anogadzira zvakanakisisa stack izvo zvichawedzera kubudirira kwechirwere ichi.
Ichokwadi chokuti mishonga iyi haina kutendeukira kune estrogen iyo inokonzerwa nemigumisiro yakanyanya zvikuru saka mumashandisi evarume vanoita kuti ive yakakosha yekuwedzera kune vazhinji vevashandi vezvemasikirwo uye vadzidzisi vemuviri. Iyo Stanozolol yakataurwa pamusoro pekutanga munyaya ino hainawo kukurudzira kuchengetedza kwemvura uye inoita kuti zvive nyore kune vashandisi kuti vawane muviri wehupenyu uye hutendere hwemishuvo dzavanoda. Kunyange zvazvo inonzwika sekuti Winstrol ndeyekuchengeteka anabolic steroid, kuitora zvakanyanya kana kuishandisa zvisina kunaka kunogona kutungamirira kumagumisiro akaipa. Saka, nguva dzose ita nechokwadi chokuti unobvunza chiremba wako usati watanga kutora deta yako. Kana ukasarudza kuenda kune injodzi yeWinstrol fomu, nguva dzose uone kuti chiremba kana mushandi wehutano anotungamirira dhigiriji. Kuzviuraya iwe pachako kungava sarudzo asi iwe unoda kuva nechokwadi pamusoro payo kuti udzivise chero matambudziko.
Kuwana unhu hwekukura hunoitawo chimwe chinhu chinoita kuti Stanozolol ave steroid yakakurumbira pakati pevarimi vemasikirwo uye vatambi vechidiki. Zvisinei, kuti iwe uwane zviitiko izvi zvinoshamisa iwe unoda kutora zvakananga uye kuenderera mberi neyero yezvokudya zvakakodzera pamwe nekuita basa rakanaka. Izvozvo zvinoreva, iwe unoda zvakare chikafu chekudya kwekudya kuti ikubatsire kuwana migumisiro iwe unofarira. Dzimwe nguva ungave wakakombererwa navanachiremba vasingazivi steroid kushandiswa mumutambo wenyika. Paunozviwana uri mumamiriro ezvinhu aya, vamwe vatambi vako kana kuti mudzidzisi wako anogona kubatsira. Zvimwe, pane zvakawanda zvakawanda pamusoro pewetaneti unogona kukurumidza kuwana chiremba wakanakisisa uyo anonzwisisa simba re steroid zvikuru saka Stanozolol.
Stanozolol steroid inokurudzirawo masero matsvuku eropa mumutumbi wako iyo inokonzera kutakura kwe okisijeni nemuviri kune zvikamu zvakasiyana zvemuviri zvakadai semasumbu. Mishonga yenyu inoda michero kuti ikure pamwe nekugadzirisa ivo pachavo. Nguva iyo muviri wako unobereka masero matsvuku eropa pane zvimedu zvinokubatsira kuti ushande zvakaoma uye kwenguva yakawedzerwa. Sezviri pachena, izvi zvinokurudzira simba rose remuviri, simba uye agility chikonzero chikuru nei vatambi, vashandi, uye mabhasikoro vanosarudza kutora Stanozolol kuti vawedzere kushanda kwavo uye vabudirire zvinangwa zvavo.
4. Stanozolol muyero
Ichi chemishonga chinogona kutorwa kana mumuromo kana muchijoka uye ichiri kukupai mhinduro imwe chete. Zviri kwauri kuti usarudze zvakanakisisa kwauri. Vamwe vanhu vanoda injena apo vamwe vanovatya uye vanosarudza kutora mapiritsi. Stanozolol mishonga inogarisa vanhu vose uye zvichida ndicho chikonzero chakakurumbira pakati pevashandisi. Misiyano bedzi ndeyokuti inomuromo inopinda muchiropa apo iyo injodzi inopinda muropa uye ine imwe hafu yehupenyu huri nani kupfuura mahwendefa. Ratidza chiremba wako chimiro chekuita kuti ugare wakasununguka kuitira kuti uzive nzira yekugadzira stacking kana pane chido.
Stanozolol muyero yakakurudzirwa kuvarume kubva ku40mgs kusvika ku100mgs pazuva asi vakadzi vanofanira kungotora pakati pe5mgs uye 15 mgs pazuva. Kune vakadzi vanoda kuda kutora mizinga yepamusoro, havafanire kuenda kumadarika 20mgs pazuva, uye ichi chiyero chinongokurudzirwa kumakwikwi evakadzi vemuviri kana kuti bodybuilders. Kutaura kuwedzerwa kuwedzerwa kwevakadzi kunogona kutungamirira kumigumisiro yakaipa yakadai sekukudzikisa hutundu hwakakura uye hunoonda semarume. Hapana mukadzi angada kuva nemurume-semuviri, uye ndiwo mukana wekutora steroid yakawandisa. Rega chiremba wako atungamirire iwe kuti ungatora sei chirwere ichi nenzira yakarurama kuti uwane mhinduro yakanaka iyo ichakubatsira kuti ubudirire mubasa rako. IWedstrol beginners inotanga kutanga nemadhora mashoma ayo chiremba anogona kugadzirisa gare gare mushure mekutarisa kufambira mberi. Kune avo vari muhare, mazinga anogona kushandisa zvakanyanya Winstrol dosji kana kutaura nachiremba kana vasina kuve nemigumisiro ipi zvayo.
Mitumbi yevanhu yakaoma, uye saka hazvibvumirwi kutanga kushandiswa kwe steroid nepamusoro dhizi, zvinogona kutungamirira kumagumisiro akaipa. Dzimwe nguva ungasangana nemimwe migumisiro kunyange mushure mokutora dhesi shoma. Kana zvikaitika, zivisa chiremba wako pakarepo mamiriro acho ezvinhu asati awedzera. Kune avo vasingatombovi nemigumisiro mushure mokutora steroid kwemazuva mamwe, uye iwe unofanirawo kuzivisa chiremba wako kuti awedzere kuyerwa kwako kuti uwane migumisiro yaunoda. Chiremba akanaka anogara achikubvunza nezvekufambira mberi uye kuti uri kunzwa sei mushure mokutora dhesi yevhiki.
Kana migumisiro yechirwere yakaoma, chirwere cheStanozolol chinofanira kuregedzerwa pakarepo, uye chiremba wako achawana mhinduro yekudzosa migumisiro yechirwere kana kupa steroid imwe. Kubatanidza chiremba wako muhutano hwose ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa yokuti iwe unakidzwe nehuwandu hweStanozolol muhupenyu panguva kana kunyange mushure mekufamba. Kudya kwakakodzera kune chimwe chinhu chinokosha chichakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako uyewo kuenderera mberi neyero yekuita basa rakakwana. Zvose zviri mumuromo uye zvisina kuraswa Winstrol madhigiri anoshanda uye anounza migumisiro yakafanana, saka, hauna dambudziko kana iwe uchisarudza kugadzirisa zvimwe.
5. Nzira yekutora Stanozolol
Nguva dzose rambira kune zvido zvechiremba wako kana iwe uchida kuchengeteka paunoshandisa Stanozolol. Inzwa wakasununguka kubvunza chiremba wako chipi zvacho chausinganzwisisi kuti akutsanangurire iwe. Simudza zvose zvaunofunga kana mibvunzo paunoshanyira chiremba usati watanga kufamba kwako. Bvunza nezvemuromo kana injectable dosages kuitira kuti usarudze zvakanyanya. Kana iwe ukasarudza kuenda kune jekisi nguva dzose iva nechokwadi chokuti mishonga inotungamirira dheji. Mushonga wemuromo unofanira kutorwa negirazi remvura. Iwe unogona kutora dhiyo kana kuti usina kudya uye nemigumisiro yakanaka kwazvo itai kuti unotora Stanozolol nguva dzose. Iko kunewo mvura inonzi Stanozolol iyo inotarisa inoda zvinhu zvemidzimu zvaunogona kunwa. Iyo tambo inonyanyisa, uye zvinokurudzirwa kuidzingirira pasi negirazi yemusi kuti uuraye kutora. Sezvaunotora dhora rako, chiremba wako anogona kukurudzira kuongororwa kweropa nguva dzose pamwechete nedzimwe mimwe miedzo yezvechiremba kutarisa kufambira mberi pamwe nemigumisiro. Iva nechokwadi chekuti iwe unodzivirira Winstrol pakushambidzika kwemahombekombe, yakachengeteka kubva mumumvuri uye kure nemhepo yakananga kana kupisa.
6. Ndiani asingafaniri kutora Stanozolol?
Kuongororwa kwezvokurapa kunokosha zvikuru sezvo inogadza kana iwe uchikodzera kutora mishonga kana iwe unofanirwa kutsvaga steroid yakasiyana iyo yakachengeteka iwe. Havasi vose vanogona kutora ichi chirwere uye vave nechokwadi chekuwana zvibereko zvakanaka. Pane dzimwe hutano hunofanira kusangana. Nokudaro, vamwe vanhu vanorambidzwa kutora Stanozolol sezvo zvinogona kutungamirira kuhutano hwehutano kunyange kana vakatora dheji shoma. Vanhu vanotevera vanorayirwa kuti varambe vari kure neserodi ine simba;
Varwere vane kenza yeprostate, kenza yemazamu neavo vane hypercalcemia-kana kuti vanhu avo iro ropa ravo rine yakakura ye calcium. Iyi mamiriro ezvinhu anogona kukuvadza kana iwe ukatora Stanozolol steroid. Ratidza chiremba wako kana iwe uri pasi pemishonga kune chero ipi zvayo yakataurwa nezvoutano.
Kune rumwe rutivi, avo vanotambura nezvirwere zvisingaperi vanofanirawo kubvunza chiremba vasati vatora Winstrol. Mimwe mamiriro ezvinhu anogona kukubvumira kutora steroid iyi asi mumadhora mashoma, sezvaunoramba uchitora mimwe mishonga yepachirwere chako chikuru. Kana iwe wakanga uine chirwere chemwoyo kana chimwe chepfungwa yepamberi, tsvaga mazano echiremba sezvo steroid inogona kudzorera dambudziko. Vamwe vanofanirwa kuchenjerera uye kuenda kunowanzoongorora kurapwa musati vatora chero steroid inosanganisira; chirwere cheshuga, zvirwere zvekuvhara ropa, chiropa, uye chinetso chepvo. Chiremba anogona kukukurudzira nenzira mbiri, kana kuti ugare kure neStananol kana kuti gadzirisa muyero uenzane nechipatara chako.
Winstrol is steroid inowanikwa pasi peDAA pamuviri wechikwata X iyo inoreva kuti inogona kutungamirira mukukanganisa kuberekwa mucheche asati aberekwa. Kana iwe uri nepamuviri zvinokurudzirwa kuti ugare kure nesteroid. Uyezve, kana uri kuronga kana kutarisira kuva nepamuviri asati auya, panguva iyoyo iwe unofanirawo kudzivisa kutora Stanozolol. Kusvikira zvino, hazvisi pachena kana mushonga wacho unogona kupinda mumukaka wemvere uye unobata mwana wako. Zvisinei, zvinokurudzirwa kutanga kutarisa chiremba wako kuti uzive kana iwe uchigona kushandisa Winstrol sezvaunenge uchiyamwisa. Usaisa mwana wako pangozi kana iwe uine mukana wekuita sarudzo yakanaka ikozvino.
Iwe haufaniri kusarudza kushandisa Stanozolol usingabatanidzi chiremba wako. Zvimwe zvemigumisiro yakashuma, zvinowanzokonzera vanhu vanotenga uye vanoishandisa pasina kuongororwa kwechiremba pamwe nekugadzirisa dhiyo yakakodzera. Chikonzero nei steroidhi inopa migumisiro yaunoona kune vakawanda vanogadzira muviri, vatambi kana mabhasikoro ndeyekuti vane madhiragi ane simba anofanira kuendeswa nehanya akawanda. Tsvaga kana muviri wako wakubvumira kushandisa steroid chero ipi zvayo kuti urege kuva nemigumisiro yakaipa inogona kutungamirira kuhutano hwehutano. Hapana mitezo pamusoro pezvinwiwa, zvokudya kana kunyange mabasa apo uchishandisa Stanozolol kunze kwekuti chiremba wako akukurudzire iwe zvimwe. Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate - Best Cutting Steroid
Kunyanya kuderedza iyi mishonga inogona kutyisa upenyu. Kana ukangofunga kuti iwe wakanyora chibvumirano chechirwere chiremba wako pakarepo kana chekudzivirira chepakati panzvimbo yekubatsira. Parizvino, hapana ruzivo rwakajeka pamusoro pezviratidzo zvingangodaro mushure mekudarika kudarika Stanozolol. Kana iwe uchinge warasikirwa newaiti ita nechokwadi chokuti iwe unotora iyo pakarepo paunenge uchiona. Zvisinei, kana iwe uchicherechedza nguva pfupi, usatora dhimbisi mbiri yekunyora kumiti inotevera uye tora zvinotevera sezvakarongwa nachiremba wako.
7. Stanozolol cycle
Kune misiyano yakawanda iyo inosvika pakushandiswa kweStanzoloi sezvo iri steroid inoshandiswa zvakasiyana-siyana. Iwe unogona kutora muromo unenge uri woga kana kufunga kuti unobatanidza iyo nejecha steroids. Iwe unogonawo kuisa mairi nevanopfurikidza zvakasiyana-siyana pakutsika kwemigumisiro yakanaka. Iko inowanzoitwa Stanozolol inotanga kusvika kwemavhiki e6 asi inogona kuwedzerwa zvichienderana nehutano hwemukati. Vashandi vanoziva ruzivo rwakawanda nguva yakareba kupfuura yevakatanga. Stanozolol ndechimwe steroid inonyanya kuzivikanwa kuti ichengetedzwe neanabolic steroid yakasiyana-siyana panguva yayo. Kuisa mishonga yakawanda kunowanzogadziriswa nezvinangwa zvaunoda kuzadzikisa pakuguma kwemishonga. Kuwanda kwevashandi vezvemagetsi vanosarudza kushandisa Stanozolol yekucheka zvinangwa zvinovabatsira kuderedza mafuta akawandisa emafuta anovabvumira kuti vachengetedze mishonga yakaonda munguva refu. Kune vashandisi vanoda kuda kuvaka kana kushandiswa kwemisumbu mishonga inogona kuvhara mushonga ne testosterone. Iwe unogonawo kuvhara Winstrol nemimwe mishonga yakadai seotbolone munguva yekucheka. Heano mamwe emitambo yakakurumbira yeStananol;
Wakatanga winstrol kugadzira mhepo-Oral chete
vhiki Winstrol (Stanozolol) Cardarine (gw501516) Anavar (oxandrolone) N2Guard
1 50mgs / zuva 20mgs / zuva 30mgs / zuva 7caps / zuva
2 50mgs / zuva 20mgs / zuva 30mgs / zuva 7caps / zuva
3 50mgs / zuva 20mgs / zuva 30mgs / zuva 7caps / zuva
4 50mgs / zuva 20mgs / zuva 30mgs / zuva 7caps / zuva
5 50mgs / zuva 20mgs / zuva 30mgs / zuva 7caps / zuva
6 50mgs / zuva 20mgs / zuva 30mgs / zuva 7caps / zuva
Mutemo uye injectable Stanozolol yekucheka
vhiki Testosterone cypionate Stanozolol (winstrol) Primobolan Depot N2Guard Cardarine (gw-501516)
1 500mgs kwevhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
2 500mgs kwevhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
3 500mgs kwevhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
4 500mgs kwevhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
5 500mgs kwevhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
6 500mgs kwevhiki 50mgs / zuva 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
7 500mgs kwevhiki Off 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
8 500mgs kwevhiki Off 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
9 500mgs kwevhiki Off 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
10 500mgs kwevhiki Off 600mgs / vhiki 7caps / zuva 20mgs / zuva
Pakati peSjected Stanozolol ne testosterone base, funga kuwedzera anromatase inhibitor yakafanana naArimidx kana Aromasin. Zvichienderana nemutumbi wako unopindira kuWinstrol cycle, chiremba anogona kutambanudza ruzivo kana kuderedza. Nguva dzose udza chiremba wako nezvekuti unonzwa sei sezvaunoenderera mberi nekufamba kwako. Paunotora mushonga wacho kwekutanga, iwe unogona kutarisana nemusoro kana kuvhara padivi rakapindwa, asi iyo inetso inonyangarika mushure mechinguva. Dana chiremba wako kana iwe uchinge uchinge wakatarisana nemamwe maitiro akareba kwenguva refu panguva, kana mushure mekufamba.
8. Stanozolol migumisiro
Iyi steroid inoshamisa inopa migumisiro yakavhenganiswa zvichienderana nekuti iwe unoshandisa sei uye nechinangwa chei. Vamwe vanhu vanoenda kuStananol nechinangwa chokucheka mafuta akawanda emamwe asi vamwe vachida kurapwa. Zvose pamusoro pako uye izvo zvaunoda kuti zvibudirire pakuguma kwemhepo. Kana iwe ukatora steroid nenzira yakarurama uye uchienda nayo nekudya kwakakodzera kana kubata muviri, iwe zvechokwadi uchafara nemigumisiro yakanaka. Zvisinei, apo muviri wako unopindirana zvakasiyana nemishonga, iwe hauzove nemusarudzo pane kutakura zvinokonzerwa nemigumisiro yeStanozolol kana migumisiro. Steroid haibatsire munhu wose, kune vamwe vanhu inenge iri usiku kune vamwe kune iyo inouya sechikomborero uye ndiyo inonyanya kubatsira pamitambo yavo yepamberi kubudirira. Sezvambotaurwa kare, mushure mekuongororwa kwechiremba kana chiremba wako anokukurudzira kuti ugare kure nemishonga saka usamanikidze nokuti steroid iri kuita zvishamiso kune shamwari yako. Mamiriro evanhu evanhu akasiyana; iwe unogona kushamiswa kuona mushonga wakabatsira mamiriyoni kuita zvinangwa zvavo kusakwanisa kukushandira iwe.
Pane mhando mbiri yemigumisiro yauchawana mushure mekutora Stanozolol, uye zvechokwadi unofanirwa kuwana chimwe asi kwete zvose. Positive Winstrol mhinduro ndeye zvinoshandiswa nemunhu wese, asi haisi mhedziso yakajeka. Vamwe vanowanzova nemigumisiro yakaipisisa iyo inogona kuita kuti vashandise mari yakawanda kurapa. Ngatitorei zvigaro zveStananoi kuitira kuti iwe unzwisise zvaunotarisira kubva kune steroid inozivikanwa.
Positive Stanozolol migumisiro
Mhedzisiro inobatsira yaunofunga yekuwana pashure pokutora Winstrol inosanganisira;
Kubudirira kwehutano hutsika hutsika huzhinji, vazhinji vevashandi veWinstrol vanowanzoita kuti vatambi uye varimi vemuviri vakwanise kuwana hutsika hwakanaka. Mushonga unopisa muviri wakawanda wemafuta uchisiya musuru hwakasimba uye unooneka. Kukurudzirwa kwemasero matsvuku eropa kunovandudzawo kupa kwezvibereko kumasumbu kusimbisa kukura kwavo nekugadzirisa zvakare. Mushonga unobatsirawo mukuchengetedza mishonga inonda kunyange mushure mekupedzisa mhirizhonga yako. Kune rumwe rutivi, mishonga yako ichava yakasimba uye yakaoma kukupa iwe chitarisiko chawakagara uchichida sechimiro kana mutambi.
Iva nekutsungirira uye simba rose remuviri, mushure mekushandisa steroid iyi iwe uchava nesimba guru iro richakubatsira kuti ushande, kufamba-famba kana kumhanya kwemaawa akawanda usina kuneta. Izvi zvichangovandudza hutano hwako hwose uye nokukurumidza kuzadzisa zvinangwa zvako. Nokuda kwekudzidziswa kwaunofanira kutakura masero akaremara, iwe uchaita nyore nyore kuvaka misumbu yako. Vanhu vazhinji vanokundikana kuwana hunodiwa hwehutano uye humiro hwemuviri nekuda kwekushaya simba kwekugumisa kana kushanda zvakanaka. Ndiyo simba raunowana kubva kushandisa steroid iyi yakasimba. Yeuka nekuda kwemigumisiro yakaisvonaka, unofanirwa kuenderera mberi nekudya kwakakodzera.
Kune vamhanyi steroid inopa simba simba uye nekukurumidza iyo inofanirwa kukunda madzinza avo. Ndicho chikonzero nei steroid iyi inonyanya kuzivikanwa pakati pemhanyi kana mabhasikoro. Asati yabvumidzwa, vatambi vakawanda vakabudirira muOlympic uye mamwe makwikwi makuru epasi rose akashandisa ichi chirwere. Kunyange nanhasi mumabasa emitambo umo kushandiswa kweSteroids hakugadziriswi, vatambi vanorondedzera migumisiro yakaisvonaka uye kubudirira kwekuita. Nokudaro, ichi chinodhaka chinogona kuva chiwedzere chikuru paunenge uchigadzirira kupindira mumakwikwi ose ari kuuya. Stanozolol ichaita kuti basa rako rive rakanyatsogadzikana munguva yekurovedza uye panguva yemakwikwi emitambo. Kumbira chiremba wako pamusoro peStanozolol inowedzera pakuvandudza simba rako rose remuviri nekukurumidza.
Munharaunda yekurapa, mishonga yakakwanisa kubata zvirwere zvakasiyana-siyana zvisingagumi zvakadai semisumbu kuparadza zvirwere pakati pevamwe. Vana vakanyanyisa kukura zvakare vave vachiratidza migumisiro yakanaka mushure mekunge mishonga ichivabatsiri kuwana chido chavo chavanoda. Tichitarisa zvakasiyana-siyana zveStanozolol kuongororwa kwevatengi, vanhu vakawanda vari kurumbidza mushonga wekubatsira vana vavo vane dambudziko rinowedzera. Kune rumwe rutivi, Winstrol ave ari mishonga yakakosha yevarwere veOsteoporosis avo vari pangozi yekutambudzika kurwadziwa uye kuputsa maoko kana makumbo sezvo mapfupa ava asina simba. Chirwere chinopa simba remuviri, uye zvinokurudzira masero matsvuku ekuberekesa kuwedzera kuwedzerwa kwezvibereko kumativi akasiyana emuviri. Saka varwere vachawana simba remuviri, kukudziridza musimba pamwe nekuvandudza ropa ravo.
Stanozolol migumisiro yakaipa
Pasinei nemigumisiro yakawanda yeSanozolol inopa kune vashandisi, inewo rutivi rwomusiya runogona kuve ruzivo nevashandisi vasingateereri mirayiridzo yekushandisa. Mamwe marapirwo akadai sekuve kurapwa kwezvimwe zvirwere zvisingaperi zvinogona kukuratidzai kune zvakakomba zveStanozolol migumisiro. Zvisinei, dzimwe nguva muviri wako unogona kuramba mishonga kunyange mushure mekurudzirwa nachiremba wako kutora steroid iyi. Usangogara uchinetseka paunenge uchiva nemigumisiro yakaipa, udza chiremba wako kuti akubatsire nokukurumidza. Kuteerera kuwana mishonga yemigumisiro kunogona kutungamirira kune zvinetso zvisingatauriki zvehutano. Usatya kutora mishonga mushure mokuverenga nyaya ino sezvo zvose zvigadzirwa kana mushonga wezvinodhaka zvine zvikamu zvaro kana zvisina kushandiswa zvakanaka. Kuratidzira kuyerwa uye mirayiridzo yekushandiswa ndiyo nzira chete yekuchengeteka uye inonakidzwa nemigumisiro yehutano. Zvimwe zvezvivako zveStanozolol zvinosanganisira;
Acne; iyi ndiyo inowanzoshandiswa neStananol side effect iyo vashandi vakawanda vakanyunyuta pamusoro pacho sezvo mishonga yakagadzirwa. Acne inobatanidzwawo pamwe nehuwandu hwehuse anenge anabolic steroid kubva pawakatora steroid kwete Stanozolol chete, muviri wako unotanga kubudisa mafuta akawanda emuviri anotungamirira mukukudzirwa kwechigamba paganda rako.
Zvinokonzera bvudzi richiwa kana kuti mhanza, Winstrol zvakare akatongerwa mhosva yekukonzera kusuruvara kwevhudzi pakati pevamwe vashandisi varo. Iyo yakakwirira yeDHT iyo iripo muStananol inomanikidza mapurisa echinyorwa kuti adye kunyange kutorega kukura zvachose. Kana ukaona bvudzi rako risina kukura sezvaiwanzoita usati washandisa steroid, taura nachiremba wako kuti awane mhinduro kusati kwaitika dambudziko rinowanzogara.
Steroid inogona kutungamirira kuchiropa kusakundikana; iyi ndiyo dambudziko rinotonyanya kunetseka rinosangana nevashandi vazhinji veStanzolo. Chinhu chipi nechipi chaunotora mumuromo mako chinofanira kupinda muchiropa chako, uye chemikemikemu mune steroid ino inogona kukuvadza. Kune rumwe rutivi, injini yeStananol inonzi inonyanya kuora kupfuura mapiritsi. I-anabolic steroids inogonawo kukonzera tumarara, kuchenesa uye mumvuri werima.
Mashoko akanaka ndeokuti iwe unogona nyore nyore kudzivisa miviri yeWinstrol kana iwe uchitevera mirairo yeiyo kana kuudza chiremba wako pakarepo unotanga kuona zvimwe zvezviipi izvi zvakaipa. Kune dzimwe mimwe migumisiro yakajeka yaunosangana nayo mumazuva ekutanga eduro yako inofanira kubva shure kwechinguva. Musoro wepamusoro uye kuvhara kunopoteredza injection nzvimbo ndeimwe yemigumisiro yemaitiro ayo wese anosangana nawo mumazuva ekutanga emhepo. Zvisinei, kana iyi migumisiro yemigumisiro inogara kwenguva yakareba kudarika yakatarirwa tsvaga kurapwa nokukurumidza sezvinobvira. Paunenge uchishandisa steroid inoshamisa inonyanya kufunga nezvezvibatsiro kana mitsva inenge ichida kusvika pakuguma kwemhepo.
9. Stanozolol hafu-hupenyu
Hupenyu hweStanozolol hupenyu hunoenderana nemhando ipi yaunosarudza kushandisa. Iyo inonzi Stanozolol ine hupenyu hunoshingaira hwemaawa 8-9 kana hafu yeupenyu hwe4 kusvika kumaawa 5. Iyo fomu injectable ine hupenyu hwakareba hunoita mumuviri wako iyo inotangira maawa 36-48 kana hafu yeupenyu hwema 18 kusvika kumaawa 24. Nhamba yacho inogara ichigoverwa maererano nehafu yehupenyu hwemufomu waunosarudza. Kune avo vanofarira kutora chirwere chemukanwa kana mapiritsi vachave nemayero avo kaviri pazuva uye haafaniri kudarika 100mgs pazuva. Iyo jekisi yechirwere inofanira kuendeswa kunyanya 25mg mumazuva ose e2-3. Zvinokurudzirwawo kutora mamwe mapfupa pakati pemiti imwe neimwe kuti urege kutora steroid yakawanda mumuviri wako. Mushure mekuongororwa kwezvokurapa, chiremba achagadzirisa dhiyo yakanakisa uye kuenderera kwehutano hwako. Izvo zvaunoda kuzadzikisa ndizvo izvo chiremba achavimba nacho kuti aone kuti iwe uri nani sei.
10. Stanozolol inobatsira
Kuva wechitatu inonyanyozivikanwa anabolic steroid, Stanozolol inobatsira inouya nezvipo zvakasiyana-siyana izvo zvinoita kuti mishonga ive shamwari kune vashamisi vakawanda uye mizimba. Sezvatakanga tataura kare, steroid yakatanga kushandiswa pakurapwa kwepamusoro pakudaro pakuchengetwa kwevana angioedema uye Osteoporosis. Mushure mekuziva kuti mishonga inogona kubatsirawo vatambi uye varimi vemuviri kuti vavandudze kushanda kwavo yakave yakakurumbira pakati pevatambi vechiremera. Stanozolol inopa zvipo zvakasiyana-siyana kuvashandisi vayo, uye ndeyotevera;
Stanozolol haishanduki kuva isrogen, ruzhinji rwevanabolic steroid kana vopinda mumuviri vanokurumidza kuchinja kuva estrogen. Zvisinei, Winstrol anosimba kuti ave pakati pevasholic steroid vashoma vasingashanduki mu estrogen. Estrogen ine zviremera zvakakomba mune varume saikukudzirwa kwezvipfuva zvevakadzi. Saka, iwe hauna chikonzero chokuzvidya mwoyo paunotora steroid inoshamisa.
Inobvumira vashandisi kukudziridza mishonga yepamusoro, Winstrol anokwanisa kupa hutano hwekukura kwemasumbu kune vashandisi inogona kuva imwe chikonzero chikuru nei vatambi vakawanda uye bodybuilders vachichifarira. Kusiyana nedzimwe vana vanabolic steroid iyo inongowedzera hukuru hwemasumbu, Stanozolol inowedzerawo simba remasimba. Kana kudya kwakakodzera uye kushanda kwakapedzana nekufamba, iwe unogona kukurumidza kusimbisa masimba, akasimba uye anhu hwakanaka. Kana iwe uchida kuvaka mishonga yako, ipapo Winstrol anoita sarudzo yakakwana kwauri.
Steroid haina kukonzera kusachengetwa kwemvura kunoita kuti zvive zvakanaka kune vakawanda vanoita zvekugadzira muviri. Kuwanda kweSteroid iripo pamusika nhasi kunotungamirira mukuchengetwa kwemvura mumisungo inoramba vashandisi kuti vasvike musimba uye akasimba. Sezvaunoramba uchifamba murwendo rwako rwekuvaka musimba, haufaniri kunetseka pamusoro pemvura chero ipi zvayo kana uchishandisa Stanozolol.
Winstrol inopa vashandi vayo mukana wekusarudza kuti vangada sei kushandisa iyo sezvo iripo zvose zviri mumuromo uye injectable mafomu. Vanhu vazhinji vanotya majekiseni angangodaro nekuda kwemarwadzo, asi Stanozolol inokupa mukana wekunakidzwa nezvibatsiro usingatauri chero nheyo. Inonyorera inowanikwa mumapiritsi nemvura. Chiremba wako achakubvumira kuti usarudze maitiro ako aunoda maitiro. Kana iwe uchigadzirisa iyo injodzi Winstrol, iva nechokwadi chokuti mushonga kana mushandi anopa utano hwose. Usaita chikanganiso chokuzvivhara iwe kana iwe usati uri nyanzvi.
Chimwe chinhu chinokosha icho vashandi vanonakidzwa panguva uye mushure mokunge Stanozolol iri kutarisana nemigumisiro yakakurumidza. Steroid dzakawanda dzinotora nguva usati watora mushure mhinduro dzakakwana. Zvisinei, izvozvo hazviitiki kana iwe uri kutora Winstrol, nenguva yaunopedza mutambo wekutanga, iwe uchange uchiona uye uchiona zvabuda. Kusarudza kudya kwakakodzera pamwe chete nekufambidzana nekuita basa rakakodzera, iwe uchawana mhinduro mukati mechinguva chiduku. Tevera mirairo yose inorayirirwa uye ibatanidza chiremba wako muhutano hwose hwekuita nani uye nekukurumidza.
Kunewo mamwe mazano atakagara ataurwa munyaya ino anosanganisira kurapa kwekuwedzera kwevana, Osteoporosis pakati pezvirwere.
11. Kuongorora kweStanzolo
Vanhu vazhinji vanosanganisira masayendisiti uye vashandisi veStanzolo vakanyora zvakasiyana-siyana zvinodhaka zvinoshora Winstrol apo vamwe vachizvirumbidza. Zvinowanzoitika kuti chigadzirwa chiwane mhando dzakasiyana-siyana kubva kune vashandisi sezvo vasingakwanise kuwana mhinduro yakafanana mushure mekuishandisa. Uchitarisa kuongororwa kwevatengi vakasiyana-siyana, unogona kugumisa kuti vazhinji vevashandi ve winstrol vakagutsikana nemigumisiro yavakawana mushure mekushandisa chigadzirwa zvakanaka. Kuwanda kwevaya vanonyunyutira nemigumisiro yakawanda inowanzokonzerwa nekudarika kana kushandiswa kwemishonga pasina kuenda kuchipatara kuongororwa. Sezvakataurwa kare kukundikana kusanganisira chiremba wako, mudzidzisi uye chikafu mune zvose zvinogona kukuratidza iwe kumigumisiro kana kukundikana kuwana mhinduro inoda.
Vadzidzisi vematunhu nevatambi vave vachishandisa steroid kwemakore akawanda vave vachipa chigadzirwa chakanakisisa. Ichi chinoratidza zvakajeka kuti zvakakosha kuwedzera. Vatambi vakawanda vanorumbidza Winstrol nekuvabatsira kuti vaite zvakawanda mumabasa avo akasiyana-siyana emitambo. Vamwe vashandisi vanorumbidza mushonga wekuwedzera musimba wavo kukura uyewo simba rose remuviri. Kuonda uye humwe humwe mano ayo Stanozolol ari kurumbidzwa kuburikidza nekupa vazhinji vashandisi varo. Vashandi veSteroid vasinganzwisisiki nemajojo ayawo anofara sezvo Winstrol inouya nehurukuro inoshandiswa iyo inopa mimwe yakafanana neyo injectable.
Ichinyanya kushandiswa cheStanano ishu humwe ruzivo rwakakosha iyo vashandi vakawanda vari kutaura pamusoro pekutarisa iyi steroid. Mushonga wacho unogona kushandiswa uri woga mumutambo wekucheka uye unogonawo kugadzirisa imwe steroid anabolic mukuchengetedza pamwe nemamwe madhiragi. Iwe unogona zvakare kutarisa maongorori akasiyana-siyana aripo paIndaneti, uye zvechokwadi uchazofadzwa nezvipupuriro vanhu vari kupa mushure mekuvimba ne steroid iyi. Vamwe vashandisi vanogunun'una pamusoro pemusoro, kuchenesa uye kuzvimba pamusoro penzvimbo yejojo ​​iyo inowanzovhiringidza iyo inopera mukati maawa mashomanana. Vaya vanotsvaka kurapwa munguva pfupi mushure mekunge vava nemigumisiro yechirwere vave vachibatsirwa, izvo zvinoreva kuti vazhinji veStanozolol migumisiro ine mhinduro pavanotarisana kare. Ingoyeuka kuti uone chiremba wako kuti arege kuva nemigumisiro yakaoma.
12. Stanozolol yokutengesa
Hapana mubvunzo kuti Winstrol iri pakati peSteroid inoshandiswa uye yakasarudzwa nevakawanda vemuviri uye vatambi. Izvozvo zvinoreva kuti kuda kwechirwere ichi nguva dzose kunopfuura makore. Nhasi kuwana chirwere hakufaniri kuva dambudziko zvakare sezvo iwe unogona kuzvitenga nyore nyore kubva kune imwe nzvimbo yakawanda yekuchengetedzwa kwepaIndaneti. Zvimwewo, unogona kutarisa mumabhasiro pasi pevhu anogadzira iyo injectable Stanozolol yokutengesa. Chiremba wako anogona kunge ari munhu akakurudzira kukutungamirira pane kwaunogona kutenga Stanozolol kana iwe usingazivi kuti unogona kuitenga. Zvisinei, nhasi zvinhu zvishoma zvishoma nyore nekuda kwekambani. Iwe unogona nyore nyore kutsvaga paIndaneti uye uwane vatengesi veStananoi vanotungamirira.
Usati waita chero kuraira kubva kune chero mupi weStananoi kutanga ita tsvakurudzo yako kuti unzwisise kuti kambani inoshanda sei. Kuenda kune mutengesi anoyemekedzwa ndiyo nzira yakanakisisa yekuve nechokwadi chokuti uri kuwana chigadzirwa chemhando iyo ichakupa nemigumisiro yaunoda. Usavimba nevatengesi vemunhu, dzimwe nguva vangave vari kutengesa zvinhu zvakaderera zvingave zvinokonzera kukuvadza mumuviri wako panzvimbo yekukubatsira kuti uite zvido zvaunoda. Pane mazano akasiyana-siyana aunogona kushandisa kuti uwane muchengeti weStanano mutengesi unosanganisira kutarisa kuongororwa kwevatengi kana kuongororwa pamwe nekutaura kune vamwe vatengi vavo kana iwe unogona kuwana imwe.
Zviratidzo ndezveimwe nzira yekuwana kodzero yekutengesa Winstrol. Mushandi anogutsikana achagara achikutaura kune mutengesi akakurudzira kana kukunyevera iwe paunenge wava kuda kuvimba mutengesi asina kunaka. Tora uchishandisa internet uye utore nguva yako yekudzidza vatengesi vakasiyana-siyana usati waita sarudzo pamusoro pekuti ndiani waunogona kuvimba naye. Kukanganisa kunoitwa nevanhu pavanotsvaka steroids kutarisa mutengo, uye izvozvo zvinogona kukuedzai nyore kutenga mutengo wakaderera. Tarisa kambani inobata nguva, uye iyo inopa steroids yemhando. Iva nechokwadi chokuti iwewo uone kuti mitemo iri munyika yako inoti chii pamusoro pemishonga. Kunzwisisa mutemo wekutenga, kushandiswa kana kutumira Stanozolol pasina mvumo yakakodzera kuchaita kuti zvive nyore kwauri kuziva uye kupi tenga Stanozolol. MuUnited States, somuenzaniso, Stanozolol inorongwa seboka rechirongwa che 3 rinorayirirwa, zvinoreva kuti haugone kuzvitenga pasina chiremba chaiyo chiremba. Nokudaro, kutumira mushonga pasina chirongwa chakanaka kunogona kutungamirira kurangwa chakakomba.
13. Stanozolol yekuvaka muviri - (muchidimbu)
Pakati pevana rakanyatsobudirira uye yakavimbika vanabolic steroids ndiyo Winstrol iyo kwemakore akawanda haina kumboodza mwoyo vashandisi. Iyo mishonga inokurudzira musimba kukura pamwe nekubatsira vashandi kuchengetedza mitsipa yakaonda. Kune avo vanotora mishonga yakarurama vanovimbiswa yekuwana zvibereko zvakanaka nekuguma kwekufamba. Yeuka kuenda nechiyero pamwe nekudya kwakakodzera uye kushanda kuti uwane humiro hwemuviri unoda uye hunoita kuti misi miviri ikure nokukurumidza. Winstrol haina kuwedzera kuchengetedza kwemvura mumatumbu ako akaita seana anabolic steroid iripo pamusika.
Stanozolol inopa hutano uye hutundu hwakaoma pane imwe steroid ipi zvayo. Iwe unogonawo kuisa Winstrol nemishonga yakasiyana-siyana kana anabolic steroids. Nekucheka mutsara, steroid inogona kukubatsira kuti ubvise mafuta emafuta akawandisa anoita kuti zvive zvakaoma iwe kuti uve nemisungo yakaoma, inooneka uye yakaonda. Pamusoro peiyo, Stanozolol ndiyo chete steroid inovandudza simba rose remuviri, simba pamwe nekukurudzira musimba kukura. Vatambi vakawanda uye vanogadzira muviri vanorondedzerawo zvavanoona zvichangoitika mushure mekunge vatanga maitiro avo. Winstrol inokurudzirawo masero matsvuku emuropa mumutumbi wako kuti uwedzere kubudirira nekugadzikana kwekudya kwezvibereko kumativi akasiyana emuviri wako.
Iyo mishonga inopa muiti wehutano chisarudzo chokusarudza maitiro ehutachiwana ayo anonyatsonakidzwa nawo kubva kune injinga, muromo uye fomu yemvura. Kuti zvive nemigumisiro yakanaka, chiremba wako anofanira kuita chirongwa chekurapa kuti aone kana iwe ukwanisa kushandisa steroid zvakachengeteka uye kuti uone kufambira mberi. Taurira chiremba wako pakarepo iwe unofungidzira kuwedzeredza kana kana iwe uchinetseka zvakakomba nemigumisiro yakareba.
Spadari, A., Romagnoli, N., Predieri, PG, Borghetti, P., Cantoni, AM, & Corradi, A. (2013). Migumisiro yepraarticular treatment ne stanozolol pane synovial membrane uye cartilage mumuenzaniso wekuvhima we osteoarthritis. Kutsvakurudza mune zvechiremba sayenzi, 94(3), 379-387.
Solbach, P., Potthoff, A., Raatschen, HJ, Soudah, B., Lehmann, U., Schneider, A. & Vogel, A. (2015). Testosterone-receptor inofadza hepatocellular carcinoma mumusanadzi wemakore we 29 ane nhoroondo yevanabolic uyerogenic steroid kushungurudzwa: yenyaya yenyaya. BMC gastroenterology, 15(1), 60.
Milhorn, HT (2018). Anabolic Steroid Dependence. In Zvishandiso Zvinoshandisa Matambudziko(pp. 179-185). Springer, Cham.
Choi, SM, & Lee, BM (2015). Kuenzanisa nekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekusarudza uyerogen receptor modulators uye anabolic androgenic steroids. Nyanzvi yekufunga nezvekuchengetedza zvinodhaka, 14(11), 1773-1785.